Monday, 13 February 2017 22:30
Leenconni Fara'oonotarrati injifannoo gonfachuun galan
Leenconni hin ittifamne wayita waancaa baranaa fudhatan
Walmorkiin Waancaa Kubbaa Miilaa Afrikaa waggaa lamatti altokko biyyoota miseensota Konfedereeshina Kubbaa Miilaa Afrikaa ta'aniin qopheeffama. Walmorkiin kun adeemsifamuu edda jalqabee waggoota 60 kan lakkoofsise yoo ta'u, waggoottan kana keessatti kan baranaa dabalatee yeroo 31faf adeemsifameera.
Biyyoota miseensota Konfedereeshina Kubbaa Miilaa Afrikaa 56 keessaa hanga ammaatti biyyoonni 14 qofti waancaa fudhachuu danda'aniiru. Misir si'a torba waancaa fudhachuudhaan dursaa kan jirtu yemmuu ta'u, Kaameerun al shan, Gaanaan ammoo si'a afur waancaa fudhataniiru.
Walmorkiin baranaas magaalota Gaaboonitti guyyoota 20f biyyoota 16 jidduutti adeemsifamaa tureefi kanneen keessaa 14 sadarkaa sadarkaadhaan harca'uudhaan falmii waancaaf biyyoota seenaa waancichaa keessatti iddoo olaanaa qaban lameen, Kaameeruniifi Misira walitti fideera.
Deggartootaafi jaallattoota Kubbaa Miilaa Afrikaa jidduutti eenyutu mo'ata jechuun abdiidhaan eegamaa kan ture falmiin biyyoota lameenii kun deebii kan argate, Dilbata darbe ALI halkan keessaa sa'aatii shanirratti ture.
Falmii kanas maqaa masoo “Leenca hin ittifamne” jedhamuun kan beekamu gareen kubbaa miilaa Kaameerun, Fara'onoota jedhamuun kan beekamu garee Misiraa 2-1n injifateera.
Walmorkii kanaan Kaameerun Burkiinaa Faasoo wajjin 1-1n, Gaaboon wajjiin 0-0n adda ba'uun, Giinii Bisaawu 2-1n, Senegaal liigooreedhaan 5-4n, Gaanaa 2-0n mo'achuudhaan tapha waancaatti ammoo Misira 2-1n injifachuudhaan milkaa'uu danda'eera.
Walmorkii baranaa kanaan walumaagalatti biyyoonni 16 kan hirmaatan yoo ta'u, walmorkiiwwan 32 adeemsifamaniiru. Dimshaashumatti galchootni 66 ta'an kiyyoo saaphanaan kan walargan yoo ta'u, kanneen keessaa gareen Leencotaa 14 galchuudhaan torba itti galeera.
Walmorkii maahessaa waancaaf adeemsifamerratti dursee kan galche garee Fara'oonotaati. Fara'oononni haara galfannaa dura hanga daqiiqaa 22tti karra Leencota hin ittifamneerra marmaaruudhaan galcha dabalataa galchuuf falmii olaanaa godhanis hinmilkoofne.
Haala kanaan leenconni Fara'oonota weeraruudhaan duubaa ka'anii galchoota lama galchuun Waancaa Afrikaa yeroo 5faf hammatanii bookkisaa gara biyyasaaniitti wayita deebi'an ummataafi mootummaa biyyasaaniitiin simannaan ho'aa taasifameeraafi.
Tapha waancaa kana mo'amuudhaan sadarkaa 2fa kan argate gareen Fara'oonotaa meedaaliyaa meetii argatus itti hingammanne. Sababiinsaas Ummanni misiraa yeroo baay'ee kan mi'eeffate waancaa ta'us barana garuu milkaa'uu hindandeenye.
Walmorkii sadarkaa 3fa argachuuf adeemsifameen Burkinaa Faasoon Waancaa Kubbaa Miilaa Afrikaa yeroo 4f tan fudhatte Gaanaa 1-0n mo'achuudhaan meedaaliyaa nahaasaa argateera.
Monday, 13 February 2017 22:28
Ganzabee Dibaabaa rikardii haarawaa galmeesiste
Fiigicha mana keessaa meetira kuma lamaa Kibxata darbe Ispeen, Magaalaa Saabaadeelitti adeemsifameen atileetii beekamtuun Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa sa'aatii haarawaa galmeesisuudhaan mo'atteetti.
Dorgommii kanarratti Ganzabeen riikardii addunyaa kan fooyyeesite kanaan dura ALA bara 1997 sa'aatii atileetii Romaaniyaa Gabreelaa Zaabootiin qabamee ture daqiiqaa 5:23.82 ture daqiiqaa 5:23.75n xumuruudhaani.
Fiigicha meetira kuma tokkoofi 500n addunyaarratti maqaa olaanaa tan qabdu Atileet Ganzabee Dibaabaa dorgommii kana jalqabaa kaastee dursuudhaan xumuruun ishees beekameera.
Akkasumas shaampiyoonaawwan mana keessaa kan meetira kuma sadii, fiigicha meetira kuma shaniifi dorgommii maayila lamaan irra deeddeebiin injifachaa kan turte Ganzabeen olompikii Riiyoo 2016 fiigicha meetira kuma 1fi 500n lammaffaa ba'uun meedaaliyaa meetii argamsiisuun ishee kan yaadatamuudha.
Dorgommii Kibxata darbee kana atileetiin Morookoo Siihaan Hiilaali daqiiqaa 5:52.88 lammaffaa, quxusun Ganzabee Annaa Dibaabaa ammoo daqiiqaa 2:55.32 sadaffaa ba'aniiru.
Monday, 13 February 2017 22:26
Dorgommiin dubartootaa dhaadannoo “Waan dandeessuuf” jedhuun adeemsifamuufi
Jala bultii guyyaa dubartootaa “March 8” sababeeffachuun Fiigichi Olaanaa Itoophiyaa, kiiloo meetira shanii dubartoonni qofti waggaa waggaadhaan irratti hirmaatan iftaan Finfinneetti adeemsifama jedhamee eegama.
Walta'iinsa Waajjira Fiigicha Olaanaa Itoophiyaafi Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitiin kan qophaa'e fiigichi kun yeroo 14faf adeemsifamuunsaas beekameera.
Akka addunyaatti yeroo 106faf, Itoophiyaatti ammoo yeroo 41faf kan kabajamu Guyyaa Dubartootaa Addunyaa kana sababeeffachuun dorgommii adeemsifamu kanarratti atileetoota beekamoofi ambaasaaddaroota biyyoota addaddaa dabalatee dubartoonni kuma 11 ol ta'an ni hirmaatu jedhamee eegama.
Waajjirichi akka addeesseetti hanga yoonaa buufataalee galmee afuritti dubartoonni kuma sagal ol kan galmaa'an yoo ta'u, lakkoofsi kun har'aafi boru akka dabaluu danda'us ibsa kennamerraa beekuun danda'ameera.
Ambaasaaddarri Fiigicha Olaanaa Itoophiyaa, Atileet Masarat Daffaar akka ibsitetti, Itoophiyaan dirreewwan atileetiksii addaddaarratti dubartoota gootootaa kanneen akka Daraartuu Tulluu, Geexee Waamii, Faaxumaa Roobaa, Xirunash Dibaabaafi kkf horatteetti; gara fuula duraattis kana caalaa akka horattu abdiin qaba jetteetti.
Waajjirri Fiigicha Olaanaa Itoophiyaa waggottan 14n darban dorgommiiwwan adeemsiserratti atileetoota kanneen akka Assallafach Margaa, Sambaree Tafarii, Sullee Uturaafaa horachuudhaan guddina atileetiksii biyyattiif hojii bu'a qabeessa hojjeteera; ammas hojjechaa jiraachuu dubbatteetti.
Dorgommii kiiloo meetira shanii Fiigicha Olaanaa Itoophiyaa kanaan duraatiin sa'aatii fooyya'aan daqiiqaa 15:55 yoo ta'u, sa'aatiin kun iftaan 15:35 gadi ta'u qaba jechuudhaan addeessiteetti.
Guyyaa dorgommiin kun itti adeemsifamu kana dubartoonni tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'an badhaasa qarshii, meedaaliyaafi waraqaa ragaa akka argatanis beekuun danda'ameera.
Torban kana/This_Week 28787
Guyyaa mara/All_Days 1313298